Sharmaarke oo Diiday Go'aanka Guddiga Doorashada
Ra'iisul wasaare Cumar
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdi Cali Sharmaarke ayaa diiday go’aan kasoo baxay guddiga doorashada Soomaaliya oo ku saabsanaa qaabka soo xulista xildhibaanada ka imanaya gobollada Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan.
Warsaxaafadeed kasoo baxay ra’iisul wasaaraha ayuu ku sheegay in go’aan ka gaaaridda goobta lagu qabanayo doorashada Xildhibaanadda Goboladda Hiiraan iyo Sh/Dhexe ay tahay mid u talla Dowladda Federaalka.
“Go’aan ka gaaridda goobta lagu qabanayo Doorashadda Xildhibaanadda Goboladda Hiiraan iyo Sh/ Dhexe waa mid u talla Dowladda federaalka Soomaaliya” ayaa lagu yiri bayaanka.
Ra’iisul wasaaraha waxa uu sheegay in Guddiga Doorashadda dadban looga bahan yahay uun in ay wada tashi la yeeshaan Isimada ugu jira 2-da Gobol Hiiraan iyo Shebellaha Dhexe Odayaasha 135-ka.
Ra’iisul Wasaare Sharmaarke ayaa ku booriyey Guddiga doorashadda in ay wada tashi la yeshaan dhammaan odayaasha dhaqanka ee ugu jira ggoboladda Hiiran iyo Sh/Dhexe 135 oday uguna tagaan goob kasta oo ay jogaan , isla markaana ay Dowladda Federaalka u soo gudbiyaan natiijadda ka soo baxda wada tashigaas sidii horay loogu heshiiyey.